TAEKWONDO : Mikasa hitondra avo ny lokon’i Madagasikara eran-tany i Sahondra Rakotoanosy
Tsy manam-bola ny Federasiona nasionalin’ny taekwondo malagasy, ka tsy afaka niantoka ny hitondrana an’i Sahondra Rakotoanosy hiatrika ny fiadiana ny tompondaka maneran-tany hatao any Hammamet Tunisie ny 9 ka hatramin’ny 13 avrily izao izy. 16 mars 2018
Ny lokon’i Madagasikara no nosafidiany hoentina na dia sady Malagasy no frantsay aza izy. Sahondra Rakotoanosy no vehivavy Malagasy voalohany hiady ny amboara maneran-tany. Nanomboka tamin’ny taona 2010 no efa nanao taekwondo izy, ary nanomboka ny taona 2012 no nanao fifaninanana. Nahazo ny toerana faharoa avy hatrany tamin’ny ‘championnat departemental’.
Medaly volamena kosa no azony tamin’ny ‘championnat régional’ ary medaly volafotsy tamin’ny ‘cham- pionnat de France’. Hatreto dia miisa 38 ireo ady natrehany ka nahazoany medaly volamena miisa 11 ; volafotsy miisa 12 ary alimo miisa efatra. Mbola tsy resy mialoha ny ampahefa-dalana mihitsy izy hatreto. Tepana mainty amin’ny taekwondo i Sahondra Rakotoanosy, ary ao amin’ny sokajy latsaky ny 49 kilao no misy azy.
Tompondaka faharoa an’i Frantsa izy tamin’ny taona 2012 sy 2017, ary tompondakan’i Madagasikara ihany koa tamin’ny 2017 teo. Efa nandray anjara tamin’ny fifaninanana iraisam-pirenena maro, toy ny Open internationaux Wtf tany Autriche, Slovénie, Hollande ary Belgique. Tafiditra ao anatin’ny fisokajiana maneran-tany ny ekipa nasionaly malagasy ary mitana ny lohalaharana mihitsy i Sahondra Rakotoanosy. Izany no nahatonga ny Federasiona malagasy hitondra azy hiady ity amboara maneran-tany ity, ka anisany miady mafy amin’izany ny lefitry ny filohan’ny federasiona. Sady manana mpanazatra frantsay, Tony Comprelle izay efa impolo no tompondakan’i Frantsa izy, no sady efa nitondra atleta maro tamin’ ny fiadiana ny amboaran’i Eoropa sy maneran-tany izy. Ny lefitry ny filohan’ny Federasioa malagasy kosa no mpanazatra ny klioba misy azy eto Madagasikara. Nanapa-kevitra ny hitady vola manokana amin’ny namana sy olom-pantatra ary ireo mpankafy ny taranja taekwondo ny rainy Pierre Rakotoanosy.
Nanokatra fitadiavam-bola amin’ny aterineto izy amin’izanyka https:// www.leetchi.com/c/soutenons-sahondra-rakotoanosy no ahafahana manampy azy ireo. Na izany aza dia anisan’ireo atleta arahin’ny Federasiona frantsay ity tovovavy ity. Nandritra ny roa taona dia nanazatra tena tao amin’ny , “centre de formation espoirs” izay itadiavan’ny Federasiona frantsay ireo mahay ka handrafitra ny ekipa nasionaly frantsay izy. Raha tsy misy ny hoenti-manana ka tsy ampy ny fanampiana dia mety ny lokon’ny Frantsay no hoentin’i Sahondra Rakotoanosy hiady ity amboara iraisam-pirenena ity.